warkii.com » Da’yarka Kai Havertz Oo Kusii Jeeda Magaalada London, Chelsea Oo Isku Diyaarinaysa Shaacinta Heshiiskiisa Iyo Xogtii Ugu Dambaysay
Da’yarka Kai Havertz Oo Kusii Jeeda Magaalada London, Chelsea Oo Isku Diyaarinaysa Shaacinta Heshiiskiisa Iyo Xogtii Ugu Dambaysay
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa qarka u saaran inay heshiis la gaadho Bayer Leverkusen oo ay ka doonayso da’yarka khadka dhexe ee Kai Havertz oo hore loo sheegay in heshiis shaqsi ah ay Blues la gaadhay.
21 jirkan khadka dhexe ee weerarka raacsan oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee da’diisa ah, waxa uu xili ciyaareedkan dhaliyey 12 gool oo Bundesliga ah iyo lix uu caawiye ka noqday ayaa la sheegay in labada kooxood ee Chelsea iyo Bayer Leverkusen ay bilaabeen inay ka wada hadlaan sidii ay u kala iibsan lahaayeen.
Warku sheegay in wada-hadalka u dhexeeya labada kooxood uu meel wanaagsan marayo, isla markaana ay Chelsea miiska u saarayso Leverkusen lacag dhan £80 milyan oo Gini.
Sida uu sheegay wariye David Ornstein oo ka hawl-gala wargeyska Athletic, Chelsea waxay ku dhow dahay inay gacanta ku dhigto da’yarkan kooxaha badan danaynayaan, waxaana Lampard iyo masuuliyiinta sare ee Blues ay diyaar u yihiin inay bixiyaan £80 milyan oo Gini.
Laacibkan ayaa doonaya in mustaqbalkiisu xallismo inta aanay bisha July dhamaan ama horraanta August, waxaana ka go’an inuu xagaagan ka baxo BayArena oo ah halka uu kusoo baxay.
Havertz iyo Frank Lampard ayaa la sheegay inay si toos ah u wada hadleen, isla markaana uu tababaraha Chelsea ku qanciyey inuu yimaaddo Stamford Bridge, laakiin laacibka reer Germany ayaa ku xidhay shuruud ah in marka hore ay Blues usoo baxdo Champions League, taas oo ah shuruudda ugu weyn ee uu ku xidhay imaatinkiisa London.
21 jirkan waxa uu xiisaynayay inuu ku biiro Real Madrid oo uu taageere u yahay, laakiin Los Blancos ayaa tartanka ka baxday iyadoo caddaysay in aanay diyaar u ahayn inay bixiso lacagta ay Bayer Leverkusen ku xidhay Havertz.